कम निदाउनु हुन्छ ? हाई ब्लडप्रेसरको समस्या निम्तिन सक्छ | Suvadin !
साइकोसोम्याटिक मेडिसिन जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले कम निद्रा वा गुणस्तरीहीन निद्राको असरबारे कुरा गरेको छ । जर्नलमा स्ट्रोक, हार्टएट्याक तथा मुटुसम्बन्धी समस्याले मानिसलाई मृत्युको मुखसम्म पु¥याउन सक्ने सन्दर्भ उल्लेख गरिएको छ । यसको मुख्य अध्ययन युए डिपार्टमेन्ट अफ साइकोलोजीका स्नातक छात्र क्यारोलिन डायलले गरेका हुन् । निद्रालाई कतिपय रोगसँग जोड्दै उनले आफ्नो अध्ययन गरेका छन् ।
Jun 09, 2019 19:52
काठमाडौं, जेठ २६ - के तपाईंको निद्रा एकदमै कम छ ? छ भने विचार गर्नुस्– हाई ब्लडप्रेसरको समस्या निम्तिन सक्छ । एरिजोना विश्वविद्यालयले हालै यसबारे एउटा अनुसन्धान गरेको छ । अनुसन्धानले निष्कर्ष निकालेको छ– कम निद्रा वा उचित निद्राको सम्बन्ध सीधै ब्लडप्रेसरसँग जोडिएको छ । यसअघि निद्रा र ब्लडप्रेसरबीचको सम्बन्धबारे कुनै कुरा बाहिर आएको थिएन ।
अनुसन्धानका लागि उनले ३०० जनाको समूह बनाएका थिए । यसमा २१ देखि ७० वर्षसम्मका महिला–पुरुष सामेल थिए । र, सामेल भएका मानिसमध्ये कसैलाई पनि मुटुसम्बन्धी रोग थिएन । त्यसपछि सबैलाई दुई दिनसम्म पोर्टेबल ब्लडप्रेसर कफ लगाइयो ।
कफका माध्यमबाट हरेक दिन ४५ मिनेटको अन्तरालमा ब्लडप्रेसर जाँच गरियो । सबैको नाडीमा रातभर ‘रिस्ट वाच’जस्तै एक्टिग्राफी ९निद्राको गुणस्तर नाप्ने यन्त्र० लगाइयो । जसले आरामदायी ढङ्गमा सुते तिनको ब्लडप्रेसर ठीक देखियो भने जो कम सुते वा कमजोर निद्रा जसलाई भयो, उसको ब्लडप्रेसर हाई भएको देखियो ।
यसरी उक्त अध्ययनले एकै रातमा पनि उचित र स्तरीय निद्रा नहुँदा ब्लडप्रेसर बढेको देखायो । मानिसले अब निद्राका गुणस्तरीय बारेमा पनि राम्ररी सोच्नुपर्ने देखियो । यसको सम्बन्ध शारीरिक अवस्थासँग जोडिएको प्रमाणित भएको छ ।
अध्ययन टोलीले निद्रा सुधार्न कग्नेटिभ बिहेवियरल थेरापी ९सीबीटीआई०ले ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्ने पनि बताएका छन् । निद्रा समस्या हटाउन यो थेरापीका बारेमा अमेरिकन एकेडेमी अफ स्लिप मेडिसिन तथा अमेरिकन कलेज अफ फिजिसियन दुवै सहमत छन् । दुवै संस्थाले यो थेरापीले निद्राको गुणस्तर सुधार्न मद्दत पुग्ने बताएका छन् ।
अनुसन्धानका कोअथर जोन रुइज भन्छन्, ‘‘सुत्नुअघि फोन अर्कै कोठामा राख्नुस् । निद्रालाई असर गर्ने कुनै पनि सामान पर राख्नुस् । तपाईंको ब्लडप्रेसर नियन्त्रण गर्न यो उपाय काम लाग्छ ।’’